कोरोना महामारीकालमा विश्व हिन्दू परिषद् नेपालको सेवा कार्य
Posted on June 12, 2021 by मकालु खबर
काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोश्रो लहर शुरु भएलगतै विश्व हिन्दू परिषद् नेपालको सेवा विभागले देशका विभिन्न गाउँ तथा शहरहरुमा विभिन्न सेवा कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
विहिप नेपालको सेवा विभागले लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई लक्षित गरी राहत वितरणको कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गरेको छ । विश्व हिन्दू परिषद् नेपाल सेवा विभागले कोरोनाकालमा गर्दै आएको सेवा कार्यहरु यस प्रकार रहेका छन ।
खाद्यान्न वितरण: लकडाउनका कारण न्यून आय भएका तथा मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेलाई खानाको समस्या उत्पन्न भएको छ । खाद्यान्न अभाव भएकाहरुलाई विश्व हिन्दूपरिषद् नेपाल, सेवा विभागले खाद्यान्न किट वितरण गरेको छ ।
सेवा विभागले काठमाण्डौ उपत्यका एवं पोखरा महानगरका : साना मठ मन्दिरका पुजारी, वेदपाठशाला, वृद्धाआश्रम तथा अनाथालयहरुमा समेत खाद्यान्न किट उपलब्ध गराएको छ ।
चिकित्सक परामर्श सेवा: विश्व हिन्दू परिषद नेपालले कोरोना संक्रमितहरुको सहायताको लागि आवश्यक चिकित्सकिय परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । परिषदले अनलाईनका माध्यमले कोरोना संक्रमितहरुको लक्षणबारे जानकारी संकलन गरी आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श प्रदान गर्ने गरेको छ । कोरोना संक्रमितहरुको लागि आवश्वक औषधी, अक्सिजन, एम्बुलेन्स सेवा, तथा आईसोलेशन सेवाको लागि सहजीकरण समेत गर्ने गरेको छ ।निःशुल्क आयुर्वेदिक काढा वितरण स् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गराउने आयुर्वेदिक काढा विश्व हिन्दू परिषद नेपाल, सेवा विभागले निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
विहिपले कपिलवस्तु, रुपन्देही, जनकपुरधाम, लहान, राजविराज लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा उक्त आयुर्वेदिक काढा वितरण गर्दै आईरहेको छ ।परिषद्ले सेवाकार्यलाई लकडाउन अवधिभर निरन्तरता दिने बताएको छ ।
Posted in समाचारLeaveaComment on कोरोना महामारीकालमा विश्व हिन्दू परिषद् नेपालको सेवा कार्य
Posted in बैंक/वित्तLeaveaComment on ‘साना किसान भएको देशमा कृषिमा वैदेशिक लगानी ठूला माछाले साना माछा खाएजस्तो’
लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने नाडाको माग
काठमाडौं । लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै लैजान नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सरकारले हाल घट्दो क्रममा रहेको संक्रमणको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजान नाडाले अपिल गरेको हो ।
नाडाले जनतालाई छिटो भन्दा छिटो खोपको समुचित व्यवस्था गरी संक्रमणबाट बच्ने अन्य सुरक्षात्मक उपायहरूको कडाइकासाथ पालन गराउँदै उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
थपिदो लकडाउन अवधिका कारण अब जनता स्वयं नै आफनो दुःख, पीडा र अभावका कारण बाध्य भई सडकमा आउने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको र यस्तो सम्भावित समस्यालाई सरकारले यथोचित सम्बोधन पनि गर्न नसकिरहेको बर्तमान अवस्थामा निषेधाज्ञाको अवधि थपिँदै जाँदा समस्या अरु भयावह हुने भएकाले अवस्था बुझी समयमा नै लकडाउन खुकुलो बनाउन माग गरेको छ ।
Posted in समाचारLeaveaComment on लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने नाडाको माग
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले नागरिक केयर सेन्टर विराटनगरलाई पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कोभिड १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण एवं स्वास्थ्योपचारमा सहजीकरण गर्दै आएको नागरिक केयर सेन्टरलाई एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअनुरुप उक्त रकम सहयोग गरेको बैंकले जनाएको छ ।
उक्त रकम बैंकका क्षेत्रीय प्रबन्धक पूर्णबहादुर श्रेष्ठले नागरिक केयर सेन्टरका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार जाजूमार्फत उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए ।
चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा नागरिक केयर सेन्टरका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष महेश कुमार जाजू, एभरेष्ट बैंक लि., प्रदेश नं. १का क्षेत्रीय प्रबन्धक पूर्ण बहादुर श्रेष्ठू लगायतकाको उपस्थिति रहेको थियो ।
Posted in बैंक/वित्तLeaveaComment on एभरेष्ट बैंकद्वारा पाँच लाख रकम सहयोग
काठमाडौं । नेपालमा शनिबार थप ३ हजार ३८४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर गरिएको ८ हजार ५ सय ६ वटा पीसीआर परिक्षणका क्रममा २ हजार ३ सय ८२ र ५ हजार ९ सय ८८ एन्टीजेन परिक्षणका क्रममा एक हजार दुई जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६ लाख २६ हजार ५ सय ३५ पुगेको छ ।
त्यस्तै कोरोनाका कारण थप ६१ जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म नेपालमा ८ हजार ३ सय ६६ जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै थप ६ हजार २ सय ९५ संक्रमित निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म नेपालमा ५ लाख २७ हजार १११ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । हाल नेपालमा ७१ हजार ३०१ संक्रिय संक्रमित आइशोलेशनमा र ५५२ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । हालसम्म नेपालमा ३२ लाख ७ हजार २०८ वटा पिरिआर र १ लाख २ हजार ९४० वटा एन्टीजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
Posted in कोरोना बिशेष, मुख्य समाचार, स्वास्थ्यLeaveaComment on थप ६१ जनाको निधन, ६२९५ संक्रमणमुक्त हुँदा कति थपिए ?
काठमाडौं । विगत ४ वर्षमा बालश्रमिकको संख्यामा विश्वभर ८४ लाखले वृद्धि भएको छ ।
कुल १६ करोड पुग्नुका साथै दशौं लाख अन्य बालबालिका कोभिड-१९ को प्रभावका कारणले बाल श्रमको जोखिममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र युनिसेफद्वारा जारी पछिल्लो प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
बालश्रमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जारी गरिएको बाल श्रम २०२० को अनुमान प्रवृत्ति र यसपछिको बाटो शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले बाल श्रमको अन्त्य गर्नेतर्फ भइरहेको प्रगति विगत २० वर्षमा पहिलो पटक रोकिएको हुनाले सन् २००० देखि २०१६ सम्म बाल श्रमिकको संख्यामा ९ करोड ४० लाखले कमी आएको अवस्था उल्टिने खतरा रहेको चेतावनी दिएको छ ।
हाल विश्वभरि रहेका बाल श्रमिकहरूमध्ये ५ देखि ११ वर्ष बीचको उमेर समूहका बाल श्रमिकको संख्यामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्वि भई उनीहरुले आधाभन्दा बढी हिस्सा लिइसकेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा मनोसामाजिक अवस्थामा असर पार्न सक्ने भनी परिभाषित जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको संख्यामा २०१६ यता ६५ लाखले वृद्वि भई ७ करोड ९० लाख पुगेको जनाएको छ ।
महामारीको असरस्वरूप २०२२ को अन्त्यसम्ममा थप ९० लाख बालबालिका बाल श्रममा धकेलिने जोखिममा रहेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पुग्न नसकेको खण्डमा भने उक्त संख्या ४ करोड ६० लाख पुग्ने कुरा पूर्वानुमान अध्ययनले देखाएको छ।
२०१६ देखि नै अगाडि बढेका एसिया तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्र एवं दक्षिण अमेरिका तथा क्यारेबियन क्षेत्रमा केहि प्रगति हासिल भइरहेकोमा कोभिड-१९ ले त्यसलाई खतरामा पारेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र तथ्यांक विभागद्वारा संयुक्त रूपमा प्रकाशित नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदन २०२१ ले नेपालमा बाल श्रमिकको संख्या घट्दो क्रममा रहेको र सन् २००८ मा १६ लाख बाट २०१८ मा आइपुग्दा ११ लाखमा झरेको कुरा उल्लेख गरेको छ ।
खतरायुक्त काम गरिरहेका बालबालिकाको संख्या २००८ मा ६ लाख २० हजार रहेकोमा २०१८ मा २ लाख २० हजारमा झर्दै उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको छ ।
यी उपलब्धिहरू अहिलेको कोभिड-१९ महामारीका कारण सिर्जना भएका चुनौतीका कारण जोखिममा रहेका छन्। ‘बालबालिकालाई बाल श्रम र त्यसका अरु जोखिमहरू जस्तै भौतिक र मनोसामाजिक क्षति, शिक्षा बाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था र शोषणबाट जोगाउन कोभिड-१९ पूर्व नै चुनौतिपूर्ण थियो । नयाँ तथ्यांकहरूले देखाएअनुसार, बालबालिकासहितका परिवारहरूलाई यो महामारीको सामाजिक-आर्थिक प्रभावले धेरै असर गरेको छ । जेठ महिनामा गरिएको द्रूत बालबालिका र परिवार ट्र्याकर सर्वेक्षणका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारहरूले रोजगार तथा जीविकोपार्जन गुमाएका छन्,’ नेपालका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि एल्के विसले भने‚ ‘पहिलेदेखि नै श्रम गरिरहेका बालबालिकाले कोभिड-१९ को कारण निम्तिएको आर्थिक क्षति तथा विद्यालय बन्द जस्ता कारणले थप समय श्रम गरिरहेका वा चिन्ताजनक अवस्थामा काम गरिरहेका हुनसक्छन् ।’
Posted in अन्तरराष्ट्रिय, समाचार, स्वास्थ्यLeaveaComment on बालश्रमिकको संख्यामा विश्वभर ८४ लाखले वृद्धि : युनिसेफ
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले केही दिनअघि मात्र ‘डिजिटल सिटिजन’ अभियानअन्तर्गत अनलाईन बीमा दाबी सेवाको आरम्भ गरेको थियो ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी टीकापुर शाखाबाट बीमा गरेकी, टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ ब्लक नम्बर ९ बस्ने शोभाकुमारी बमको हालसालै कोरोनाको कारण टीकापुर अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।
बीमितका अभिकर्ताले अनलाईनबाटै दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए र सोअनुसारको दाबी रकम दाबीकर्तालाई कम्पनीले दुई कार्यदिनमै प्रदान गरेको जनाएको छ ।
लकडाउनको समयमा उनका श्रीमान ध्रुव खत्रीलाई सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्समा गरेको जीवन बीमाको दाबी फर्छ्यौट भरपाइमा हस्ताक्षर गराउन घरसम्म पुगेका क्षेत्रीय शाखा प्रमुख केशव राज गिरीले उल्लेखित लाभ रकम १० लाख, बोनस रकम ३५ हजार तथा काजकिरिया खर्च बापत ५० हजार गरी जम्मा १० लाख ८५ हजार रकम दाबीकर्ता ध्रुव खत्रीको बैंक खातामा अनलाइनमार्फत् जम्मा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
Posted in बैंक/वित्तLeaveaComment on सिटिजन लाइफको अनलाईन बीमा दाबी सेवा सजिलो, २ दिनमै मृत्यु दाबी रकम हस्तान्तरण
कोभिडका कारण बन्द रहेको नर्भिकको ओपीडी आइतबारदेखि संचालनमा आउने
काठमाडौं । थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले आउने आइताबरदेखि ओपीडी सेवा पूर्णरुपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कोभिड–१९ को दोश्रो लहरको संक्रमण तीव्र बनेसँगै बिरामीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नर्भिकले ओपीडी सेवा बन्द गरेको थियो ।
पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण निरन्तर घटिरहेको छ । कोभिड संक्रमण घटेसँगै अस्पतालमा उपचारका लागि आउने नन्‌कोभिड बिरामीहरुको चाप पनि बढेको अस्पतालले जनाएको छ ।
कोभिडका बिरामीको संख्या घट्नु र नन्‌कोभिडका बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि उनीहरुको स्वास्थ्य सेवालाई ध्यानमा राखी निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको छाता संगठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन अफ नेपाल(अफिन)को निर्णयअनुसार नर्भिकले ओपीडी सेवा पुनः सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ ।
नर्भिक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहका अनुसार अस्पतालमा आउने बिरामीहरुको स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्ण रुपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालनासहित ओपीडी सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
आइतबारदेखि कोभिडको दोस्रो लहर फैलिनुअघि सञ्चालनमा रहेका बहिरंग विभागअन्तर्गतका सबै सेवा उपलब्ध हुने नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ ।
Posted in स्वास्थ्यLeaveaComment on कोभिडका कारण बन्द रहेको नर्भिकको ओपीडी आइतबारदेखि संचालनमा आउने
काठमाडौं । ई कमर्श प्लेटफर्म रिचार्जरले कोरोनाका साथै अन्य आकस्मिक बिरामीहरुका लागि लक्षित गर्दै पोर्टेबल अक्सिजन ब्याग बजारमा ल्याएको छ ।
कोभिडसम्बन्धि सबै किसिमका सामानहरु बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउँदै आएको रिचार्जरले अक्सिजन व्यागको बिक्री वितरण सुरु गर्न लागेको जनाएको छ ।
जेठ २८ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजेदेखि ५ बजेसम्म रिचारजर एपमा उक्त व्याग खरिदका लागि बुकिङ तथा अर्डर गर्न सकिने रिचार्जरले जनाएको छ ।
उक्त अवधिमा बुकिङ गर्नेहरुलाई पोर्टेबल अक्सिजन २ हजार रुपैयाँको दरमा उपलब्ध हुनेछ । उक्त अवधिमा रिचार्जरका प्रयोगकर्ताले ५०० देखि ५ हजारसम्म क्यास प्वाइन्ट रिडिम गर्न सक्नेछन् ।
१ लिटर क्षमताको उक्त पोर्टेबल व्यागले ४५ मिनेटदेखि १ घण्टासम्मका लागि बिरामीलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
उक्त अवधिमा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन पोर्टेबल अक्सिजनले सधाउ पुर्‍याउनेछ । एक पटक अक्सिजन सकिए पछि अक्सिजन सिलिन्डर वा अक्सिजन रिफिल गर्ने ठाउँबाट व्यागमा फेरी भरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
रिचार्जरले १० लिटर क्षमताको अक्सिजन सिलिण्डर ९ हजार ९९९ रुपैंयामा उपलब्ध गराउनेछ भने सर्जिकल मेल्टबोन मास्क ३ रुपैंयाका साथै अन्य वस्तुहरु सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
गुगल प्ले तथा एप्पलको एपस्टोरबाट रिचार्जर डाउनलोड गरी खाता खोल्दा १ हजार क्यास प्वाइन्ट पाइनेछ । सामान खरिद गर्दा यस्तो क्यास प्वाइट रिडिम गरी ५ देखि १० प्रतिशतसम्म छुट पाउन सकिने जनाएको छ ।
Posted in अर्थ / वाणिज्य, अर्थ समाचार, समाचारLeaveaComment on रिचार्जरले ल्यायो बिरामीका लागि आकस्मिक पोर्टेबल अक्सिजन ब्याग
Posted in मनोरञ्जन, समाचारLeaveaComment on दुर्घटनामा परेर अर्धचेत रहेकी कलाकार घिमिरेको ३ वर्षपछि उद्धार
Posted in स्वास्थ्यLeaveaComment on कोभिड जितेका पोलिस नागरिक भन्छन्- नेपालमा पनि यूरोपस्तरको अस्पताल रहेछ
त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका सहायक डिन झाको निधन
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका सहायक डिन प्राध्यापक डाक्टर रामनारायण झाको निधन भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले झाको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै दुःख व्यक्त गरेको छ । डा झा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि प्राध्यापकको अध्यापन पेशामा रही हाल विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका सहायक डिनको रुपमा रहेका थिए ।
झाको निधनले विश्वविद्यालय र अन्य अध्ययन संस्थानमा अपूरणीय क्षति पुगेको संस्थानले जनाएको छ ।
Posted in समाचार, समाचार, समाज, स्वास्थ्यLeaveaComment on त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका सहायक डिन झाको निधन
झिनो अकंले घट्यो नेप्से, १६ अर्बमाथिको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजार परिसूचक १.८० अंकले घटेको छ ।
बिहीबार कारोबारको अन्तिमसम्ममा नेप्से परिसूचक ०.०६ प्रतिशतले घटेर ५२७.८७ बिन्दुमा पुगेको छ । यस दिन सेन्सिटिभ परिसूचक २.५९ अकंले बढेर २९४४.८० बिन्दुमा पुगेको छ ।
आज कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहको परिसूचकमध्ये जीवन बीमा, माइक्रोफाइनान्स, उत्पादन तथा प्रशोधन, निर्जीवन बीमा, होटेल्स तथा पर्यटन,अन्य र बैंकिङका सुचकहरु घटेका छन् भने विकास बैंक, म्युचुअल फण्ड, लघुवित्त, जलविद्युत्, व्यापार, इन्भेस्टमेन्ट वित्त समूहको परिसूचक बढेका छन् ।
यस दिन २ सय २० कम्पनीको ३ करोड ६ लाख ६ हजार ६ सय ४४ कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुँदा १६ अर्ब १० करोड ४ लाख १२ हजार ४ सय ३६ रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
पाँचथर कम्पनी लिमिटेड कम्पनी बजारमा सर्वाधिक कमाइ गरी पहिलो स्थानमा छ । दोस्रो स्थानमा शिब श्री हाइड्रोपावर कम्पनी रहेको छ ।
यी दुबै कम्पनीकाे सेयर मूल्य १०/१० प्रतिशतले बढेका छन् ।
Posted in शेयर बजारLeaveaComment on झिनो अकंले घट्यो नेप्से, १६ अर्बमाथिको कारोबार
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमाशुल्क भक्तानीको बिलम्व शुल्कमा छुट दिने भएको छ ।
कम्पनीले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को संक्रमण तथा नेपालको अधिकांश जिल्लाहरूमा जारी निषेधाज्ञाको कारण बीमितहरुले बीमाशुल्क किस्ता समयमा तिर्न नसकेका जनाउदै छुट दिने भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
जेठ २७ गतेबाट लागू हुने गरी बीमा शुल्क तिर्दा लाग्ने बिलम्व शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
२०७८ असार मसान्त भित्र बीमाशुल्क किस्ता तिर्ने बीमितलाई बीमालेख व्यतित अविधको अधारमा बिलम्व शुल्क ५० प्रतिशत देखि १०० प्रतिशत सम्म छुट, तीन महिनासम्म बीमालेख व्यतित भएको हकमा शत प्रतिशत बिलम्ब शुल्क छुट र यस्तै ३ देखि ६ महिनासम्मको हकमा ७५ प्रतिशत र ६ महिनाभन्दा माथिको हकमा ५० प्रतिशत छुट पाउने जनाएको छ ।
बीमितले सार्वजनिक आवागमन बन्द भएको, बैंक शाखाहरू संचालन नभएको तथा समयमा किस्ता तिर्ने रकमको व्यवस्था हुननसकेको कारण तिर्न असमर्थ हुँदै आइरहेका थिए ।
असार मसान्तभित्र बीमाशुल्क किस्ता तिर्ने बीमितलाई बिलम्बशुल्कमा छुट प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
Posted in बैंक/वित्तLeaveaComment on महालक्ष्मी लाइफले बीमाशुल्क भुक्तानीको बिलम्व शुल्कमा छुट दिने
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य घटेको छ । छापावाला सुन तोलामा ३ सय रुपैयाले घटेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार प्रतितोला ९४ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला ९३ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार हुने भएको छ ।
त्यसैगरी, तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै, आज चाँदीको मूल्य ५ रुपैयाँले बढेको छ । चाँदी प्रतितेला १ हजार ५५ रुपैयाँमा कारोबार हुने महासङ्घले जनाएको छ ।
Posted in अर्थ समाचार, समाचारLeaveaComment on सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालन गरेको छ । अस्पताल परिषरभित्र काउन्टर सञ्चालन गरी बैंकले त्यहीबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न थालेको हो ।
अस्पतालका कर्मचारी, विद्यार्थी र विरामीको सहजताका लागि एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालन गरिएको कुमारी बैंकका विराटनगर शाखा प्रमुख अंकित पाण्डेले बताए । सो काउन्टरबाट बैंकमा खाता खोल्ने, पैसा जम्मा गर्ने, निकाल्ने सहितका सेवा प्रदान गरिदै आएको छ । नोबेल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पूर्वी नेपालकै ठूलो अस्पताल हो ।
नोबेलले तलब खाता कुमारी बैंकमा सञ्चालन गरेकाले नोबेलमा कार्यरत करिब १ हजार ७ सय कर्मचारीले पनि कुमारी बैंकमै खाता खोलेका छन् । कारोवार गरिरहनुपर्ने बैंकको एक्टेक्सन काउन्टर अस्पताल परिषरभित्रै सञ्चालन हुँदा सहज भएको अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
नोबेल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी र अस्पतालमा आउँने विरामीहरुलाई पनि बैंकिङ्ग कारोवारमा सहजता मिलेको छ । कुमारी बैंकले एक्सटेन्सन काउन्टरसहित एटीएम पनि अस्पताल परिषरभित्रै राखेको छ । कर्मचारी, विद्यार्थी र विरामीलाई बैंकिङ्ग कारोवारमा सहज बनाउँन बैंकसँग समन्वय गरी अस्पताल परिषरभित्रै एक्सटेन्सन काउन्टर र एटीएम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नोबेल अस्पतालका सञ्चालक डा.सुनिल शर्माले जानकारी दिए ।
प्रदेश १ को मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र इलाममा कुमारी बैंकले १६ वटा शाखा विस्तार गरेर बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले मोरङमा दुई र सुनसरीमा एउटा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालन गरेको छ । देशभर १९५ शाखा, १६२ एटीएम, २५ शाखारहित बैंकिङ्ग इकाई तथा १३ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिदै आएको कुमारी बैंकले जनाएको छ ।
Posted in समाचारLeaveaComment on नोबेलमा कुमारी बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर
बालबालिकामा देखापर्ने मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोमबारे जान्नैपर्ने कुरा
काठमाडौं । मल्टी सिस्टम इन्फलेमेटरी सिन्ड्रोम कोरोना संक्रमित बालबालिकाको मुटु फोक्सो, मिर्गौला, छाला तथा आँखाजस्ता अगंहरू सुनिने समस्या हो ।
यो सामान्यतया कोरोना संक्रमित भएको २ देखि ४ हप्तापछि देखा पर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना संक्रमित अथवा संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका बालबालिकालाई तीन दिनसम्म ज्वरो आएमा अथवा यीमध्येका दुई/तीन लक्षण देखापरेमा तत्काल अस्पताल लैजानुपर्ने जनाइएको छ ।
घाँटी तथा पेट दुख्नु
ज्वरो आउनु, पखाला लाग्नु
छाला/नङ तथा ओठ निलो हुनु
यो समस्या के कारणले देखिन्छ भनेर यकिन भइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर यो कोरोना भाइरस संक्रमित वा संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका बालबालिकामा देखिने गरेको जनाएको छ । त्यसकारण यस्तो समस्या आउन नदिन जनस्वास्थ्य मापदण्डका पालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
Posted in स्वास्थ्यLeaveaComment on बालबालिकामा देखापर्ने मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोमबारे जान्नैपर्ने कुरा
राष्ट्रिय पारा तेक्वान्दो खेलाडीहरुलाई नगदसहित खाद्यान्न सहयोग
काठमाडौं । नेपाल तेक्वान्दो संघअन्तर्गत पारा कमिटीले आफ्नो मतहातमा रहेका राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई नगदसहित खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ ।
कोेभिड-१९ दोस्रो लहर नयाँ भरियन्सले गर्दा नेपाल सरकारले जारी गरिएको निषेधाज्ञाको कारण पाराका खेलाडीहरु मर्कामा परेको हुँदा पारा कमिटीले खेलाडीहरू क्रमशः दिपेश महत, रामबहादुर अधिकारी, लोकराज शाही, पलेशा गोर्वधन, विशाल गर्बुजा, रञ्जना धामी र श्रृजना घिसिङ्गलाई २ बोरा चामल, १ बक्सा खाने तेल, नुन, ५ केजी दाल र नगद ५,००० रुपैयाँ घर घरमै पुराएर सहयोग स्वरुप प्रदान गरिएको छ ।
खेलाडीहरुलाई खाद्यान्न पारा कमिटीका सदस्य रोशित उन्निथानबाट उपलब्ध गराइएको थियो भने पारा कमिटीका सदस्य रामचन्द्र श्रेष्ठ, हेमन्त भट्टराई, र राजन उप्रेतीबाट नगद ४० हजार रुपैयाँ सहयोगका लागि उपलब्ध गराएका थिए ।
उक्त सहयोग स्थालमा पारा कमिटीका सचिव एवं ओलम्पियन दिपक विष्ट, पारा प्रशिक्षक कविराज नेगी लामा र १३ औं सागमा २ स्वणर्धारी मण्डे काजीले खेलाडीहरुको घरघरमा गई सहयोग प्रदान गरेका छन् ।
Posted in समाचारLeaveaComment on राष्ट्रिय पारा तेक्वान्दो खेलाडीहरुलाई नगदसहित खाद्यान्न सहयोग
काठमाडौं । कोभिड- १९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका सुकुम्वासी परिवारलाई राहत स्वरुप चामल प्रदान गरिएको छ । कागेश्वरी नगरपालिका-६ स्थित मुलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला छेउमै रहेको सुकुम्वासी टोलका ११ परिवारलाई ३० केजी बराबरको १-१ बोरा चामल वितरण गरिएको हो ।
तेक्वान्दोका अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक एवं प्रशिक्षक अशोक खड्काको पहलमा जोरपाटी निवासी तेक्वान्दोकै पूर्व प्रशिक्षक राजकुमार ढुंगानाले राहतका लागि सहयोग गरेका हुन् । खड्काले सुकुम्वासी टोलमै पुगेर सम्बन्धितलाई राहत वितरण गरे । २०७२ सालको महाभूकम्पमा पनि खड्काकै अग्रसरतामा सोही टोलका पीडित सुकुम्वासीलाई टहरा निर्माण गरिदिनुका साथै पाल र राहत वितरण गरिएको थियो ।
जारी निषेधाज्ञाको अवधिमा ३७ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको तथा २ मृगौला पीडितलाई आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरिएको खड्काले जनाएका छन् । कागेश्वरी नगरपालिका वडा २ का अशक्त वृद्धा ६७ वर्षीय बाबुलाल नगरकोटीलाई ओड्ने ओछ्याउनेका साथै राहत पनि उपलब्ध गराएका थिए ।
एक अपाङ्ग भुजेल परिवार तथा रुखबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका एक कार्की परिवारलाई पनि आर्थिक सहयोगका साथै राहत उपलब्ध गराएका थिए । कोरोनाकै कारण २०७६/०७७ मा गरिएको लकडाउन र निशेधाज्ञाको अवधिमा पनि समस्यामा परेका ४ सय ५० भन्दा बढी परिवारलाई अशोककै सक्रिएतामा राहत, स्वास्थ्य सामाग्री र राहत प्रदान गरिएको थियो ।
Posted in समाचार, समाचारLeaveaComment on सुकुम्वासीलाई राहत
संक्रमितलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै नोबेल सञ्चालक डा. शर्मा
काठमाडौं । नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले कोरोना संक्रमितहरुलाई निःशुल्क खाना खुवाउँन थालेका छन् । नोबेल अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितहरुलाई डा.शर्माले आफ्नै खर्चमा मंगलबारबाट निःशुल्क खाना खुवाउँन थालेका हुन् ।
नोबेल अस्पतालमा भर्ना भएका सबै कोरोना संक्रमितलाई बिहान-वेलुकाको खाना निःशुल्क खुवाउँने घोषणा गरेर डा.शर्माले खाना वितरण थालेका हुन् । ‘कोरोना संक्रमितहरुलाई केही सहयोग पुर्याउँ भनेर हामीले निःशुल्क खाना खुवाउँन थालेका छौं,’ डा.शर्माले भने, ‘अस्पतालमा भएका सबै कोरोना संक्रमितलाई असार मसान्तसम्म बिहान बेलुकाको खाना निःशुल्क खुवाउँछौ । सम्भव भयो भने त्यो भन्दा पछि पनि खुवाउँने सोचमा छु ।’
नोबेल अस्पतालमा अहिले १२० जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन् । मंगलबार बिहान सबै संक्रमितलाई निःशुल्क खाना वितरण गरिएको छ । अस्पतालमा भएका सबै संक्रमितलाई हरेक दिन बिहान-बेलुका दाल, भात, तरकारीसहितको खानाको प्याकेट र एक-एक वोतल मिनिरल वाटर वितरण गरिने खाना वितरणमा खटिएकी नोबेल अस्पतालकी डा. बन्दना घिमिरेले जानकारी दिइन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सम्झौता अनुसार नोबेल अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गरिदै आएको छ । अब, अस्पताल सञ्चालक एवं समाजसेवी डा.शर्माले आफ्नैतर्फबाट खाना पनि निःशुल्क वितरण गर्न थालेपछि विरामीहरुलाई थप राहत मिलेको छ । डा.शर्मा समाजसेवाका क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
गतबर्ष उनले मोरङको क्षेत्र नं.३ का बेलबारी, सुन्दरहरैंचा, पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरीका कोरोना प्रभावित जनतालाई राहत वितरण गर्न ४० लाख सहयोग प्रदान गरेका थिए । उनले हजारौं विपन्न विरामीलाई निःशुल्क उपचार गराएर ज्यान बचाएका छन् । समस्यामा परेकाहरुलाई डा.शर्माले आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आएका छन् ।
Posted in समाचार, समाचारLeaveaComment on संक्रमितलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै नोबेल सञ्चालक डा. शर्मा